वडा १५ मा बालदिवसको अवसरमा आयोजित वक्तृत्वकला प्रतियोगितामा शिवगंगाकी मेनुका दर्जी प्रथम
धरान । बाल दिवसको अवसरमा धरान उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १५ ले आयोजना गरेको अन्तर वडा बाल समुह स्तरिय वक्तृत्वकला प्रतियोगितामा शिवगंगा बाल क्लबकी मेनुका दर्जी प्रथम भएकी छिन् । २९ औं राष्ट्रिय बाल दिवसको अवसरमा आयोजित प्रतियोगितामा वडा १५ का हिबिसकस बाल समुहका अनुप झा द्वितीय, नवज्योती बाल क्लबका प्रलाद भट्टराई तृतीय भएका थिए भने निराजन बाल क्लबका विवेक विक सान्त्वना घोषित भए । उनीहरुलाई कार्यक्रमका प्रमुख अतिथी वडाका वडाअध्यक्ष नरेश इवारुम लगायत वडा सदस्यहरुले नगद पुरस्कार सहित प्रमाण पत्र प्रदान गरेका थिए । वडा बाल संजालको आयोजनामा भएको प्रतियोगितामा बाल दिवसमा बालबालिकाको भुमिका भन्ने बिषय
प्रकाशित मितिः भदौ २९, २०७७
चित्रकला प्रतियोगिता गर्दै मनायो वडा ३ ले बालदिवस
धरान । कोरोनाको महामारीका बिचमा पनि धरानको वडा नम्बर ३ ले सुरक्षा सामग्री वितरण गर्दै विभिन्न कार्यक्रम सहित २९ औं बालदिवस मनाएको छ । वडा कार्यलयमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरि सुरक्षासामग्री वितरण गर्नुका साथै उत्कृष्ठ चित्र बनाउने बालबालिकाहरुलाई पुरस्कार समेत वितरण गरेको थियो । वडा नम्बर तिनका वडा सदस्य बिकाश बनेपालिका अनुसार कोभिड १९ को महामारीलाई मध्यनजर गर्दै विद्यार्थीहरुलाई घरमै बसेर चित्र बनाउन आग्रह गरेको थियो । बालबालिकाहरुले पठाएका चित्रहरु मध्ये उत्कृष्ठ ५ वटा छानिएका थिए । उत्कृष्ठ पाँच मध्ये प्राति श्रेष्ठको चित्र प्रथम हुदैं नगद दुुई हजार सहित पुरस्कृत भएकी छिन् । त्यसै गरि द्वि
ट्यालेन्ट हन्टका ७ जना बास्केटवल खेलाडिलाई एम्सद्वारा छात्रवृत्ति
धरान । खेल सँगै शिक्षालाई समेत अघि बढाउन पाँचौ बास्केटबल ट्यालेण्ट हण्टका उत्कृष्ट सात जना विद्यार्थीहरुलाई एम्स एकेडेमीले छात्रवृती प्रदान गरेको छ । आइतवार विद्यालय र धरान बास्केटबल संघ विच सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । पत्रमा एकेडेमीले विद्यार्थीलाई ६० प्रतिशत छात्रवृती दिइने उल्लेख छ । संघको सिफारिसमा ट्यालेन्ट हण्टका खेलाडी विद्यार्थी विनम राई, सञ्जय रानामगर, शिव गजमेर, इन्दु भण्डारी, सुविन राई, निकेश राई र निशान तामाङलाई छात्रवृती प्रदान गरीएको हो । सम्झौता अनुसार छात्रवृतीका लागी खेलाडिहरुले पालना गर्नुपर्ने सर्त पत्र कबुलियतनामामा छात्रवृती पाउने विद्यार्थी र अभिभावकले हस्ताक्षर गर
प्रकाशित मितिः भदौ २८, २०७७
कक्षा १२ को परिक्षा संचालन गर्ने तयारी
सुनसरी । कोरोना संक्रमणका कारण गत वैशाख महिनामा स्थगित भएको कक्षा १२ को परिक्षा संचालन गर्ने तयारी भएको छ । सरकारले कक्षा १२ मा अध्ययनरत विद्यार्थीले आफू बसोबास गर्ने सबैभन्दा नजिकैको विद्यालयबाट परीक्षा दिन पाउने तयारी थालेको हो । कोरोनाका कारण शहर बजारमा अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीहरु गाउँ फर्किएकाले उनीहरुलाई घर नजिकैको विद्यालयबाट परिक्षा दिन पाउने गरिको व्यवस्था मिलाउन लागिएको राष्ट्रिय परिक्षा बोर्डले जनाएको छ । बोर्डले कक्षा १२ को वार्षिक परीक्षामा सहभागी हुन परीक्षा फाराम भरेका विद्यार्थीमध्ये के कति विद्यार्थी महामारीका कारण हाल आफू अध्ययन गरेको विद्यालय रहेको ठाउँ भन्दा फरक जिल्ला या
समिट हाइयर सेकेन्ड्री स्कुलमा कक्षा ११ को लागी पहिलो प्रवेश परीक्षा
धरान (२०७७-०५-२६) – धरान ९ बगैँचा लाइन स्थित समिट हाइयर सेकेन्ड्री स्कुलमा कक्षा ११ को लागी पहिलो प्रवेश परीक्षा शुक्रबार विधालयमा नै सम्पन्न भएको छ । स्कुलको दोश्रो प्रवेश परीक्षा भने आइतबार हुनेछ । समिटमा आज विहान ८ बजेदेखि दिउँसो ४ बजेसम्म व्यवस्थापन संकाय अर्न्तगत होटल म्यानेजमेन्ट, ट्राभल एण्ड टुरीजम, कम्प्युटर साइन्स र एजुकेशन संकायमा परीक्षा सम्पन्न भएको प्रिन्सिपल रमेश दाहालले बताए ।
प्रकाशित मितिः भदौ २६, २०७७
महेन्द्रमा अनलाईन कक्षाको शुल्क लिने सुचना प्रति अनेरास्ववियुको आपत्ति
धरान । अनलाईन कक्षाको शुल्क लिने महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसको सुचना प्रति अनेरास्ववियुले आपत्ति जनाएको छ । अनलाईन कक्षा संचालन गर्ने विषयमा शुक्रबार विद्यार्थी संगठनहरु सँग छलफल गरेको थियो । तर छलफलमा शुल्कको विषयमा कुनै निर्णय नभए पनि क्याम्पसले शुल्क सहितको सुचना सार्वजनिक गरे पछि अखिलले आपत्ति जनाएको हो । साविक अखिलका अध्यक्ष सुजन खत्री र अखिल क्रान्तिकारीका कार्यवाहक अध्यक्ष रविन श्रेष्ठद्वारा संयुक्त जारी विज्ञप्तीमा सुचना तत्काल सच्याउन माग गरिएको छ । क्याम्पसले भदौ २८ गते देखि अनलाईन कक्षा संचालन गर्ने तयारी गरेको छ ,। कोरोना जोखिम न्युनीकरणका लागि घोषणा गरिएको लकडाउनले अर्थतन्त्र तहस
1,012 पटक पढिएको
धरान आदर्शमा कक्षा ११ को लागी पहिलो चरणको प्रवेश परीक्षा सम्पन्न
धरान / कोभिड महामारीका बिच धरान आदर्शमा कक्षा ११ को लागी पहिलो चरणको प्रवेश परीक्षा शुक्रबार विधालयमा नै सम्पन्न भएको छ । आदर्शमा साइन्स, म्यानेजमेन्ट, होटल म्यानेजमेन्ट, कम्प्युटर साइन्स, ट्राभल एण्ड टुरीजम, एजुकेशन र ह्युम्यानिटिज संकायमा परीक्षा सम्पन्न भएको प्रिन्सिपल सन्तोष पाडेलले बताए । कोरोनाको संक्रमण न्युनिकरणका लागी सामाजिक दुरी कायाम गरी एउटा बेन्चमा एक विधार्थी मात्र राखेर परीक्षा लिएको उनले बताए । कोरोना संक्रमणको चुनातीलाई मध्यनजर गर्दै स्वास्थ मापदण्ड पुर्याएर परीक्षा गराइएको अध्यक्ष लेखी सुब्बाले बताए । धरान आदर्शमा आएका जोकोहीलाई प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडी साबुन पानीले ह
प्रदेश १ मा विद्यालय खोल्ने तयारी, मन्त्रालयले माग्यो सुझाव
विराटनगर । प्रदेश १ मा जोर विजोर प्रणालीमा विद्यालय खोल्ने विषयमा छलफल शुरु भएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले यस विषयमा स्थानीय तहको रायसमेत लिएको छ । कतिपय सरोकारवालाबाट विद्यार्थी रोल नम्बरको आधारमा जोर बिजोर कक्षा सञ्चालन गर्न सकिने सुझावसमेत दिएको छ । विश्वभर महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाईरसका कारण करिब ६ महिनादेखि विद्यालय बन्द छन् । शैक्षिक गतिविधि ठप्प पनि छ । प्रदेश १ सरकारले विद्यालयमा सिकाई सञ्चालनका तयारी शुरु गरी स्थानीय तहसंग छलफल चलाएको हो । सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेले केहीअघि स्थानीय तहका प्रमुख÷उपप्रमुख तथा शिक्षा क्षेत्रका विज्ञहरुसंग विद्यालयमा सिकाई सञ्
प्रकाशित मितिः भदौ १६, २०७७
802 पटक पढिएको
शनिबार जन्मिएका मानिसको स्वभाब
आज शनिबार । हाम्रो ज्योतीस शास्त्रले मात्र हैन विश्वभर चलनचल्तिमा रहेका ज्योतिष(एस्ट्रोलोजी)ले शनिबार जन्मने मानिसको स्वभाब,ब्यबाहार तथा भविष्यको बारेमा बताएका हुन्छन् । आज हामी तिनै ज्योतिष शास्त्रहरुले भने अनुसारका शनिबार जन्मने मानिस कस्ता हुन्छन् भनेर केही जानकारी राख्दैछौ । १.शनिबार जन्मेका मानिस हरेक कुरामा गम्भिर ढङगले सोच्ने र आफ्नो दायित्व सम्झने स्वभाबका हुन्छन् ।स्मरणशक्ति राम्रो र हरेक कुरामा सुझबुझ राख्ने उनीहरुको बानी हुन्छ । २. यो बार जन्मिएका ब्यक्तिहरु ब्राण्डेड सामानहरु खरिद गर्ने सोख राख्ने गर्दछन् ।उनीहरु ठुलो प्रोफाइल भएका मानिसहरु सँग संगत गर्ने र ब्यबाहार गर्ने इच्छा र
लिंग उत्तेजित हुदैन ? यसो गर्नुहोस्
प्रायः पुरुषले कुनै न कुनै बेला भोग्ने गरेको समस्या हो, ‘इरेक्टायल डाइफङ्गसन’ अर्थात लिंग उत्तेजित नहुने समस्या । यसलाई चिकित्सकहरु (ED) भन्ने गर्छन । यौन आजमात्र हैन सृष्टिकाल देखिनै शरिरको महत्वपुर्ण जैविक आवश्यक्ताका रुपमा मानिदै आएको छ । यो मानसिक स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित हुने भएकाले ब्यक्तिको सोच विचार र ब्यबाहारले पनि यसको फिलिंस तथा आवश्यक्ता मा केही घटबढ हुन सक्तछ । चिकित्सा विज्ञानले भनेको छ यौन चाहाना नहुनु पनी रोग हो भने धेरै हुनुपनि रोग हो । यसलाई सधै सन्तुलित अबस्थामा राख्नु पर्ने हुन्छ । आजकाल भने नेपालका मात्र विश्व भरिने नै पुरुषहरुमा एउटा समस्या देखिएको छ लिंग उत्त
प्रकाशित मितिः भदौ ५, २०७७